Samsung Galaxy A71 5G na-enweta Android 11 + One UI 3.0 melite | Gam akporosis
Onyeka Onwenu | | Noticias, Samsung
Samsung na - ejigide mmelite dị elu na ekwentị igwe, ihe ikpeazụ merenụ bụ Samsung Galaxy A71 5G na gam akporo 11 tinyere One UI 3.0. Ngwaọrụ a jiri Android 10 bịa na ahịa na otu UI 2.0 oyi akwa, yabụ anyị na-eche nnukwu ihu mmiri.
Companylọ ọrụ ahụ malitere 2021 site na mmelite ihe Galaxy Z tụgharịa, mgbe ahụ, ọ bụ oge nke ya gaa Galaxy S10, gaa na Galaxy Note 10 Lite, na Galaxy Fold, gaa Galaxy M31na Galaxy M21 na Galaxy F41 y gaa Samsung Galaxy A51. Ha niile enweela ụdị kachasị ọhụrụ nke gam akporo na interface ọhụrụ nke na-ekwe nkwa ịrụ ọrụ kacha mma.
1 Ihe ọ bụla biara na gam akporo 11 + One UI 3.0
2 Esi melite ngwaọrụ
Ihe ọ bụla biara na gam akporo 11 + One UI 3.0
El Galaxy A51 5G natara mmelite UI 3.0 otu UI na nọmba ụlọ A716USQU2CUA7, otu n’ime ihe ndị dị mkpa agbakwunyere na patch maka ọnwa nke Jenụwarị 2021. Ekwenyere na ọ natara ya na mbido SM-A716U, ebe ụdị 4G (SM-A715) ga-echere obere oge.
Otu UI 3.0 na-egosi nhazigharị ọhụụ, ọ melitela ebe ndị ọrụ na-ejikarị eme ihe, dị ka ihuenyo ụlọ na ngwa ngwa ngwa ngwa, iji belata ihe ndọpụ uche, gosipụta ozi dị mkpa ma mee ka ahụmịhe ahụ kwekọọ. Improvementsrụ ọrụ ịrụ ọrụ na-enyere ngwa aka ịgba ọsọ ọsọ ma jiri obere batrị. Otu UI 3 na-etinye njikwa nzuzo ọhụrụ, ikike ndị pụrụ iche na ọdịmma dijitalụ emeziwanyela.
N'ime ndozi ndị ama ama nwere ike ịse foto ngwa ngwa Na elekwasị anya na akpaaka, Lelee, dezie ma kekọrịta onyonyo na vidiyo na-esighi ike site na Osisi Osisi. Ọnụ ọgụgụ nke asụsụ ntinye dị ugbu a bụ 370 ma tinyekwala edemede onyonyo ọhụụ na ihuenyo mkpọchi dị ike, ugbu a ị nwere ike ịhọrọ ngalaba 5 n'otu oge.
Esi melite ngwaọrụ
Mmelite a na-eji nwayọ eru mba dị iche iche, na ntinye nke izu atọ iji ruo ndị ọrụ niile. Iji melite aka ị nwere ike ime ya na Ntọala> Sistemụ> Nke di elu> Nweta nkwalite. Ọtụtụ amalitelarị ịnweta ọkwa nke melite ngwanrọ ọhụrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Samsung » Samsung Galaxy A71 5G na-enweta Android 11 + One UI 3.0 melite
Aha patent debara aha iji tinye "ọnọdụ mmanya na-egbu egbu" na ama